Ka qaad jiirarka iyo cilladaha maqaarka adoo adeegsanaya Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Ka qaad jiirarka iyo cilladaha maqaarka adoo adeegsanaya Adobe Photoshop Waa wax aad u faa'iido badan oo aan ku dabaqi karno dhammaan sawiradaas oo aan ku aragno in nooc ka mid ah cilladda ay ku dhex dillaacday maqaarka. Waxay noqon kartaa a nabar, unas wareegyada mugdiga ah of habeen baxay ama nooc kasta oo aan dhammaystirnayn in aan ku aragno maqaarka.
Photoshop waa qalab heer sare ah loo isticmaalay sawir dib udajinta ee moodada iyo xayeysiinta, Barashada noocyadan qalab waxay naga caawin doontaa inaan si tartiib tartiib ah ugu soo galno habka ay xirfadleydu uga shaqeeyaan qaybta.
Photoshop waa aalad sixir ah oo na caawin doonta sax dhamaan noocyada khaladaadka ku jira sawiradayada si fudud oo raaxo leh, daqiiqado gudahood ayaad ku heli doontaa baabi'i nooc kasta oo cillad ah oo aan ku aragno maqaarka. Qalabka muhiimka ah ee lagu saxayo noocyada khaladaadka si fudud oo dhaqso leh ayaa ah qalab balastar, qalabkan ayaa noo ogolaanaya xulo aag (cilladda qaar ay saameysay) iyo ku dheji aag kale oo aan cilad lahayn, si otomaatig ah dhiqlaha maqaarka ayaa la saxaa.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah fur sawirka Photoshop. Marka sawirku ka furmo Photoshop, waxa xiga ee ah inaan sameyno waa xulashada qalab balastar.
Waxaan samaynaa a xulashada aagga aan rabno inaan saxno leh qalabka balastarka, markaa xulashada ayaan jiideynaa ka dhigay aag qalad ka caagan. Dusha sare ee liiska qalabka balastarka waxaan ka helnaa laba ikhtiyaar: asalka iyo halka loo socdo, xulashooyinkaas ayaa noo oggolaanaya khaladaadka sax ama nuqul. Xaaladdan oo kale waxaan u adeegsan doonnaa ikhtiyaarka halka loo socdo si aan u nuqulno qayb ka mid ah guul darrooyinka aagga la soo xulay.
Ku dhowaad si otomaatig ah waxaan ku guuleysanay inaan baabiino khaladaadka ku dhaca maqaarka anaga oo kaashanayna Photoshop. Qalabkan waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa moodada iyo warshadaha xayeysiinta si looga takhaluso dhammaan khaladaadka suurtagalka ah ee moodellada yeelan karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Ka qaad jiirarka iyo cilladaha maqaarka adoo adeegsanaya Adobe Photoshop
Sida loogu diro astaan ​​macmiil qaab xirfadaysan